အပင် နုနု မချိုးပါနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အပင် နုနု မချိုးပါနဲ့
အပင် နုနု မချိုးပါနဲ့
Posted by ဆူး on Jul 27, 2011 in My Dear Diary | 17 comments
ဆူး စိတ္ကူး အပင္ႏုႏု မခ်ိဳးပါနဲ႕
ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ ညောင်ပင် ဖြစ်ပါစေ အပင်ပေါက်တဲ့ အရွယ် အပင် နုနု ချိုးလိုက်ရင် အပင်တပင် ဆက်လက် ရှင်သန်ဖို့ ပျက်သုန်းသွားနိုင်သလိုပါပဲ လောကကြီးမှာ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းစမဲ့ လူတွေကို ခေါင်းပုံဖြတ် အလိမ်အညာ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ထက် ရှေ့ဆက်လျှောက်မဲ့ ခြေလမ်းတွေ ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ မလျှောက်ရဲတော့ တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်က အိမ်နားက ကလေးမလေးတွေ အိမ်က ရှိတဲ့ စားပွဲတွေ ခုံတွေ ချပြီးတော့ အသုတ်စုံ ရောင်းမယ် ဆိုပြီး ပထမဆုံးနေ့ စပြီး ဈေးရောင်းကြတယ်။ ရှိစုမဲ့စု မုန့်ဖိုးလေးနဲ့ တွက်ချက်ပြီးတော့ အရင်းကြီးကြီးလည်း မထုတ်နိုင်တော့ လက်ဖက် နဲ့ အကြော်စုံ အအေးပုလင်းလေး အနည်းငယ် ဆေးလိပ်ဗူးလေး အနည်းငယ် စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ရောင်းကြတယ်။ ဆိုင်စစဖွင့်ခြင်းဆိုတော့ ဘယ်သူများ အားပေးမလဲ ဟိုမျှော် ဒီမျှော်နဲ့ ဖြတ်သွားတဲ့ လူတယောက် လှည့်လာပြီး ဟေ့ မင်းတို့ ဒီနေ့ ဆိုင်သစ်ကလေးလား ဘာတွေ ရလဲ ဆိုပြီး မေးလာတယ်။ ကလေးမလေးတွေက ဝမ်းသာ အားရနဲ့ ပထမဆုံး မေးမြန်းသူတွေ ဆိုတော့ သိပ်ပျော်သွားတယ်။ အသုတ်မျိုးစုံရတယ် ဂျင်းသုတ် လက်ဖက်သုတ် ခရမ်းချဉ်သီးသုတ် ထမင်းသုတ် မြင်းခွာရွက်သုတ် အအေး တွေ ရတယ်။ အဲဒီ လူက ဟိုကြည့် ဒီကြည့်ပြီး ထမင်းသုတ် ၁ဝပွဲ ပေးဆိုပြီး ပြောတော့ ထမင်းတောင် အဆင်သင့် မရှိလို့ ခဏလေးနော် ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရနဲ့ ထမင်းသုတ် သုတ်ဖို့ ပြင်တယ်။ ဒီနေ့ တော်တော် လာဘ်ကောင်းပါလား။ စစဖွင့်ခြင်းမှာတင် တော်တော် အခြေအနေကောင်းတယ် ဆိုပြီး ဝမ်းသာ အားရ ဖြစ်နေကြတယ်။ ပထမဆုံး ဆိုင်ဖွင့်တာ ဆိုတော့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံကလည်း နည်းနည်း ကြာနေတဲ့ အနေအထားမျိုး ဆိုတော့.. ငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး ဟု ပြောဆိုကာ စားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ ဆေးလိပ်ဗူး ၆ဗူး ကို ကောက်ကိုင်ပြီး ထမင်းသုတ် စာရင်းထဲ ထည့်မှတ်ထားလိုက် ငါဟိုဘက်မှာ ရှိမယ် ဆိုပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတဆိုင်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး ပြောတယ်။ အဲဒီ ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ လက်ခုပ်တီးပြီး ငါ ဒီမှာ ဆိုပြီး အချက်ပြတယ်။ အသုတ်က အရေးကြီးနေတော့ လာမယ် လာမယ် ဆိုပြီး လက်ထောင်ပြပြီး သုတ်လက်စ ထမင်းသုတ် ပြီးအောင် လုပ်ဖို့ လုံးပန်းနေတယ်။ ထမင်းသုတ် သုတ်လို့ပြီးတဲ့ အခါ ထိုလူ လက်ပြတဲ့ အတိုင်း ဆိုင်ကြီးထဲ ဝင်ပြီး ထမင်းသုတ် သွားပို့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ ဆိုင်မှာ ယောကျား တယောက်မှ မရှိပဲ မိန်းမတွေပဲ ရှိတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်။ ထမင်းသုတ် လာပို့တဲ့ အခါ ကုန်စုံဆိုင်က လူတွေက တအံ့တဩနဲ့ မမှာဘူး လို့ ငြင်းတဲ့အခါ.. ဒီကလေးမလေးတွေ ဘယ်လို ဖြစ်သွားကြမလဲ.. အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လို့ အမြတ်အစွန်းရတော့မယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လုပ်နေရင်းက အညာခံလိုက်ရတယ် ဆိုရင် ရင်ဝကို စောင့်ကန် ခံရသလို မျှော်လင့်ချက်တွေ တစစီ ကျိုးပဲ့သွားတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်သွားမှာ မလွဲမသေပဲ။ ရှိစုမဲ့စု ပိုက်ဆံလေးနဲ့ စုပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် တဖက်တလမ်းက ကောင်းရောင်းကောင်းမယ် လုပ်စားတဲ့ ကိစ္စ ဆေးလိပ် ၆ဗူး အတွက်ညာ သွားတာ တော်တော် အံဩဖို့ ကောင်းတယ်။ ထမင်းသုတ် ၁ဝပွဲ ဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ်နေရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ညာယူသွားလို့ ရအောင် မျှော်လင့်ချက်ပေးတဲ့ သဘောနဲ့ ပြောသွားတာပါ။ ထိုနေ့ တနေ့တာ အတွက် ထမင်းသုတ် ဘယ်သူက ၁ဝပွဲ ပြည့်အောင် ဝယ်စားကြမလဲ.. ထမင်းသုတ် ၁ဝပွဲကို ညာယူသွားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ထမင်းသုတ် ဆိုတာ ချက်ချင်းသုတ် ချက်ချင်းစားရတဲ့ အရာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မနက်ကနေ ညနေအထိ ထားရောင်းလို့ ရတဲ့ အရာလည်း မဟုတ်တော့ ထိုလူ ညာသွားတဲ့ အထဲမှာ မပေးလိုက်ရပေမဲ့ အရင်းထဲက ပါသွားတဲ့ အထဲမှာပါနေတယ်။ ထိုနေ့က ငိုနေတာ မြင်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။အလုပ်ကလည်း သိပ်မအားတာနဲ့ နောက်နေ့တော့ အဲဒီ ဆိုင်လေးက တခုခု အားပေးမယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ချမိလိုက်တယ်။ နောက်တနေ့တွေမှာ သတိထားမိတာကတော့ ထိုကလေးမလေးတွေ ဆိုင်မထွက်တော့ဘူး။ တနေ့ထဲနဲ့ အရင်းပြုတ်သွားလို့ ဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုတော့ ပိုပြီးတောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ မလည်မဝယ် ဆိုရင် လောကကြီးမှာ ညာချင်တဲ့ လူတွေ သိပ်များနေတယ်။ အဲဒီနေ့က ကုန်စုံဆိုင်က ပြောရှာပါတယ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သေးသေးလေးက စလို့ အကြီးကြီး အထိ လိမ်ချင် ညာချင်နေကြတာ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ဆိုင်ရှေ့မှာ သောက်ရေသန့်ဗူး လဲဖို့ ချထားတဲ့ ဘူးခွံက အစ ရေသန့် သမားလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ညာယူပြေးသွားတာမျိုးတွေ အမျိုးမျိုး နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ညာနေတာ.. အခုမှ ဆိုင်သစ် ဖွင့်တာ မိုလို့ အနီးအနားက လူတွေကို မသိမှန်း သိလို့ ပညာပြသွားတာ ဖြစ်ယ် ဆိုပြီး ပြောပြနေတယ်။ သူတို့ အတွက် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ လောကကြီးမှာ မှန်မှန် ကန်ကန် နဲ့ ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် လုပ်စားချင်တဲ့ လူတွေ အတွက် အခွင့်အရေးတော့ ပေးသင့်တယ် ထင်တာပါပဲ။
ဆူးရေ အမလည်း ကြုံဖူးတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး သိပ်မကြာဘူး ဆေးလိပ်ဗူး ညာယူတာ ခံလိုက်ရတယ်။ ဆေးလိပ်ဗူးအသစ်နဲ့ ဘာမှမပါတဲ့ ဗူးခွံနဲ့ လဲသွားတာလေ။ မျက်စိရှေ့တင် လုပ်သွားတာ။ လက်ထဲမှာ ဘာအထုတ်မှမပါဘူး။ အခုအချိန်ဆိုရင်တော့ ပုဆိုး၊ အင်္ကျီ အကုန်ချွတ်ရှာမိမှာ။ ဈေးသည်လက်သစ်မို့ မပြောရဲ၊ မရှာရဲလို့ ပါသွားတာက တန်ဖိုးမကြီးပေမဲ့ အတော်ခံပြင်းတယ်။
အေးဗျာ၊ လုပ်တဲ့သူတွေကလည်း လုပ်နေတာပဲ။ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ
သဂျီးကိုလည်း အသစ်လေးမို့ ချမ်းသာပေးဂျဘာ…
ပြောတော့.. ဘာတဲ့.. ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတဲ့..။
ဘုန်းကြီးနဲ့ လူအချိုးချကြည့်ရင်.. ကမ္ဘာမှာ..စံချိန်ချိုးလောက်အောင်များတယ်..။
များပါလေလဲ တမွဲမွဲနှင့် ဆင်းရဲကာသာ ကာလကြာလျှင် ယာစကာမျိုး တညှိုးညှိုးနှင့် ..ယုတ်မာကမ်းကုန်ရှိနေသတည်း..။
သူကြီးရယ် ပြိတ္တာဖြစ်မယ်လို့သာ ဒဲ့ပြောလိုက်ပါတော့
အဒိန္နဒါနကံကျူးလွန်ရင် ငရဲရောက်၊ ပြိတ္တာဖြစ်၊ လူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဆင်းရဲရှားပါး၊ တိရိစာ္ဆန်ဘဝမှာလည်း အစာရေစာရှားပါးတဲ့ ဒေသမှာနေရတတ်တယ်တဲ့
အရမ်းစာနာစိတ်မရှိတာနော် လုပ်ရက်လိုက်တာ သူတို့ရဲစိတ်ရင်းကိုမသိဘူး
ဘာဖြစ်လိုအဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သေချာမသိလို လား
စာမတတ်လိုလား သူများဟာအချောင်ရချင်လိုလား အဆင့်မရှိတာတောသေချာတယ်
ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေကို သေချာနားမလည် (ကြောက်ရမှန်းမသိ) လို့ ဒီလိုတွေလုပ်နေကြတာဆိုတော့ ….
အဲလိုလူမျိုးတွေပေါ့ သူတို့အတွက်ရမယ့် အကျိုးအမြတ်ကိုပဲကြည့်ပြီး
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ ကိုယ့်ဖို့ပဲကိုယ်ကြည့်တက်တဲ့ တစ်ဘို့တည်းသမားတွေဆိုတာ …..
ဘာသာ က ဘာသာပါ ။လူတွေရဲ့ အကျင့်ကို ထိန်းကျောင်းပေးတာဘာသာတရားပါ။ဒါပေမဲ့ ဘုရားကဟောခဲ့ပြောခဲ့တာ နှစ်၂၅၀ဝ ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုသေသေချာချာနားလည်လက်ခံ ကိုးကွယ်တဲ့ သူ ၅ရာ ခိုင်နှုံး မကျော်လောက်ပါဘူး။(အားရင်တော့စစ်တမ်းကောက်ချင်းသား)လက်ရှိ လူတွေကြောင့်လား အဲဒီလိုပြောလို့မရပြန်ဘူး။မျိူးဆက်လိုက်ပြောပြန်ရင်လဲရှေးလူကြီးတွေက်ို မကောင်းပြောရာရောက်မယ်။
min min myint says:
ဒါမျိုးက ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုင် တစ်ဆိုင် စဖွင့်တော့ လိမ်နည်းမျိုးစုံ နဲ ့လာလိမ် ကြတာ။ ပစ္စည်း လိမ်တာ၊ အလုပ် ရှုပ်အောင်လုပ်ပြီး ခိုးတာ။ ပိုက်ဆံ ကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လဲခိုင်းပြီး လိမ်တာ။ ဒီနားမှာ ပဲ ဆိုပြီး အတင်းအကြွေးယူတာ။ စုံနေတာပဲ နည်းတွေက။
ဖွင့်တာကြာလာရင် အတွေ ့အကြုံ ရှိလာရင်တော့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အတွေ ့အကြုံက သေသေချာချာ ထုထောင်းပြီးသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ခံနိုင်ရည် ရှိဖို ့တော့ လိုတာပေါ့။
ဟုတ်ပဗျာ အဲဒါပြောတာပေါ့.. သူခိုးဖြစ်တာတောင် အောက်တန်းစား သူခိုးဖြစ်ရတယ်လို.
လုပ်မယ့်လုပ် တော့ တစ်ခါတည်းချမ်းသာမယ့်ဟာလုပ်ပေါ့…
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ.. ဆေးလိပ်ဘူး ၆ဘူးလောက်များ လိမ်ရတယ်လို.. ကောင်မလေးတွေလဲ သနားစရာ.. ဒီလိုမျိုးသာဆို. ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် ဘယ်လုပ်စားချင်တော့မလဲ.. ဒုက္ခ..
ကောင်မလေးတွေ သနားစရာ ကောင်းလို့ ပိုစ် အဖြစ်ရေးပေးလိုက်တာပါ။
လိမ်ညာတဲ့ လူတွေက ဘာသာရေး အသိ လုံးဝ မရှိ သို့မဟုတ် မိရိုးဖလာ ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။
ခိုးတာ ဖွက်တာ မပြောနဲ့.. ရေဆိပ်မှာ ရေချိုးရင်း သူငယ်ချင်းများ အဝတ်ကို ခဏတာ ဖွက်မိလို့ နတ်ဖြစ်တာတောင် ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တောက်ပေမဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေတယ်။
ဈေးရောင်းစားနေတဲ့ သူ တစ်ယောက်ပါ
သူဌေးမဟုတ်တာ ဖူးဆွား အသိ
နောက်နေ ့လာပေးမယ် ဆိုတဲ့ ဝယ်နေကြ ဈေးဝယ် လဲ
လာမပေးပဲ ရူးချင်ဟန်ဆောင်တာ ခဏခဏပဲ
လူရှုပ်နေချိန်မှာ ပိုက်ဆံ မရှင်းပဲ ခပ်တည်တည် မ သွားတဲ့ ဈေးဝယ်မျိုးလဲ
မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ကြာလာလေလေ ဒီလိုအောက်တန်းစား ကလေကချေသူခိုးတွေများလာလေပဲပါလား…
အပင်နုနု မချိုးရဆိုလို့ ဘာများလဲလို့…….. ရှိသေးတယ်…။ ဘာတဲ့ ဘူးသီးနုနု မခူးရတဲ့…။ ဘယ်နဲ့ဗျာ ဘူးသီးဆိုတာက နုတုန်းခူးစားမှချိုတာ… ရင့်သွားရင် စားအကောင်းတဲ့ အသီးရှိတယ်..။ အပင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ရင့်မှချိုးဖဲ့ ချက်ပြုတ်စားလို့ ကောင်းတာရှိသလို နုတုန်းချိုးဖဲ့ ချက်ပြုတ်စားမှကောင်းတာလည်းရှိတာပဲ..။ အိမ်ရှင်မတွေသိမှာပေါ့..။
အဘနီရေ.. အပင်နုနု ချိုးခံရလိုက်ရင် အပင်တပင် ဆက်လက် ရှင်သန်ဖို့ ခက်ခဲသွားမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
ဗူးသီးနုနု မခူးရဆိုတာ.. ဗူးသီးပုတ် လုပ်စားတဲ့ အရွယ်ကို ပြောတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။